ko htike's prosaic collection: Mr Ewen Hardie (bare feet for burma)
Mr Ewen Hardie (bare feet for burma)
MR Ewen Hardie ဆိုသော အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ် ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်က သွေးဆာနေသော အာဏာရှင် စစ် သူပုန်များက လက်နက်ကိုင် သိမ်းပိုက်ထားသော မြန်မာပြည်၏ သွေးစွန်းခဲ့သော ရာဇဝင် အနှစ် (၂၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အပါအဝင်၊ ပြီးခဲ့သော စက်တင်ဘာလတွင် ရက်စက်စွာ ဖြိုခွင်း သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရသော သာသနာ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်း သံဃာတော်များအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မိုင် (၅၀၀) ခန့်ဝေးသော အီဒင်ဘတ်(Edinburgh) မှ လန်ဒန်(London) သို့ လမ်းလျှောက်လာခဲ့သည်မှာ ယခု လန်ဒန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။
သံဃာတော်များအား ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် ဖိနပ်မပါဘဲ မိုင် ၅၀၀ ခန့် ခရီးကို ကျောပိုးအိတ် တစ်လုံးဖြင့် ချီတတ်လာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ချီတတ်ရာ လမ်းခရီး တလျှောက်တွင် မြန်မာ့ အရေးအတွက် လက်မှတ်များကို ကောက်ခံပြီး ဗြိတိန် အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် နေအိမ်သို့သွားကာ ကောက်ခံရရှိသော လက်မှတ်များကို ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ စတင်လာခဲ့သော ဖိနပ်မပါ မိုင် ၅၀၀ ခြေလျှင် ခရီးသည် သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ သြဂုတ်လ ၄ ရက် နေ့လည် ၁၁ နာရီတွင် ဝန်ကြီးချုပ်နေအိမ်သို့ စုဆောင်း ကောက်ခံ ရရှိသော လက်မှတ်များကို ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာ လူထုကိုယ်စား မြန်မာပြည်အရေး ဒုက္ခခံကာ လုပ်ဆောင်ပေးသော Mr Ewen Hardie အား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိ ဂုဏ်ပြုမိပါသည်။
Mr Ewen Hardie ၏ ဘလော့ စာမျက်နှာကို ဒီနေရာမှ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ Click here
Posted by ကိုထိုက် at 00:56
Labels: မြန်မာ့နိုင်ငံရေး, သတင်း
Ko Htike you should walk like him.
hey Ko Oo,
Come on, If you are Burmese ... Let's go and walk around in London with bare feet from 09:00 to 20:00 on 8 of august until 26 of September. I know that Ko Htike won't mind to do it as well..
Shall we3of us do it together? huh?
If you can't do it, Just shut up.
ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာမှ မလုပ် .. ၊သူများတကာ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်တာကို ဘေးထိုင် ဘုပြောနေတဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ပျက်ပြီး၊ အချောင်သမား စိတ်ဓါတ်တွေကို မပြင်နိုင်တဲ့ လူတွေ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာ ရှိနေသေးသမျှ မြန်မာပြည်ရှေ့ရေးကို အတော်ရင်လေးမိတယ်။
5 August 2008 at 01:07
heyy!!! Ko Min Thant,
your are absolutely true.
5 August 2008 at 02:42
Hi Ko and Ko
Ko Oo why don't you join me and we all walk together... please that arthur excuse is not good anymore,
(arthur = arthritis)
6 August 2008 at 02:22
i pass...jeg sis
17 March 2009 at 08:07
※線上 aa 片試看嘟嘟※&甜心寶貝直播貼片&※免費視訊聊天室※※激情成人網愛聊天室※※線上免費a片觀看※免費a長片線上看※免費線上a電影直播※※線上免費觀看小電影※※免費色咪咪影片網※※免費檳榔西施摸奶影片※影音Live秀ez網愛聊天室♀ 找網愛聊天室 ☆☆♀ 888視訊聊天室 ☆♀♀ 真人視訊影音聊天※免費影片線上觀賞※watchshow TV情色視訊交友※s383情人視訊※※免費視訊聊天室 AV線上影城※FF-FST免費視訊聊天網※aa片免費看影片※※免費a片下載※金瓶影片交流區※Hotsee免費視訊交友聊天※美女視訊美女交友☆♀ 視訊錄影☆♀彩虹hi視訊交友網※免費觀看視訊辣妹脫衣秀※免費視訊聊天區※台灣辣妹貼圖區※1007 免費 視訊 聊天 秀成人免費視訊聊天區※視訊辣妹本人的精采照片※※0509免費 視訊聊天秀※一夜情視訊聊天室☆♀ 火辣美媚 ☆♀情色文學色情照片日本a片吊帶襪美女絲襪美女完美女人影音網波波線上遊戲網美女拳我要看美女全身巨乳美女台灣美女 kiss 情網貼圖區3d 美女短片免費試看前進東洋混血美女 莉亞丁字褲美女圖灣美女 kiss 情網貼圖區美女與野獸西洋白虎美女圖台灣美女寫真集圖片館自拍美女聊天室 s383自拍美女聊天室 視訊聊天自拍美女聊天室裸體美女台灣美女寫真貼圖區電眼美女小遊戲玩弄av美女泳裝美女寫真av美女真人美女辣妹鋼管脫衣秀手槍美女賞圖波霸美女小遊戲白虎美女圖庫一夜情聊天Google,網上論壇東東成人論壇a片論壇辣妹妹影音視訊聊天室080苗栗聊天室免費a片觀賞尋夢園上班族聊天室蠻女都會男女視訊聊天室台灣妹妹情色貼圖免費色咪咪影片網,免費自拍情色電影主播情人視訊偷窺大本營a片欣賞看a片av情色網色咪咪影片網視訊網愛交流區☆♀ 夜激情成人聊天室 ☆♀妹妹影音視訊聊天室即時通視訊女郎視訊館甜心寶貝直播電愛聊天室視訊網愛聊天室哈啦聊天室免費正妹視訊熱舞秀激情網愛聊天愛情紅綠燈視訊美女館sm聊天室買春視訊桃園聊天室情色皇朝聊天室三級電影☆♀ 成人影視☆♀免費aa片試看上班族1對1視訊☆♀ 一葉情成人貼圖片區 ☆♀免費成人影短片下載☆♀ 視訊聊天美女 ☆♀